To Defeat Elon Musk, Twitter Needs… More NFTs –
Ahhhh kuma sheegi karo inta aan ugu dambeyntii ku faraxsanahay inaan iraahdo…. Ku Soo Dhawoow Falcelinta Silsiladda.
Tani waa tijaabo cusub oo loogu talagalay TechCrunch – waa warside iyo podcast-ka wada shaqeynaya si ay kula socodsiiso waxa ka dhacaya adduunka cryptocurrencies, NFTs iyo web3. Toddobaad kasta, waxaan ka hadli doonaa mowduucyada ugu shidan ee crypto saaxiibkay Anita Ramaswamy on our podcast ka hor intaadan quusin wareysiga khabiirka warshadaha. Kadib, waxaan ku shubi doonaa xoogaa fikrado dheeraad ah warsidahan, anigoo ka faa’iidaysanaya xaalada warshadaha, anigoo calaamadeynaya wareegyada maalgelinta iyo xanta kale ee warshadaha basbaaska leh.
Tani waa dhacdadii ugu horeysay iyo daabacaadda falcelinta silsiladda, laakiin sida falcelinta silsilad kasta oo wanaagsan, arrimuhu aad ayay u xiiso badan yihiin inta aan heleyno. Markaa, waad ku mahadsan tahay inaad safarkan nala furtay, waxaanan rajaynayaa inaad jeceshahay waxaad aragtaan.
1 qaadashada ugu kulul
2 baalkii caleema saarka
4 falanqaynta lagu daray
qaadashada ugu kulul
Xitaa tobanaan milyan oo milkiilayaasha crypto halkaas ka jira, xaqiiqadu waxay tahay in web3 iyo NFTs ay leeyihiin tiro majaajillo ah oo tiro yar oo isticmaaleyaal ah marka loo eego xanaaqa iyo farxadda mawduucyadaas.
Si sii kordheysa, maal-qabeenada ganacsiga ee Silicon Valley waxay ku sharadayaan in meheradahani ay si dhakhso ah u gaari doonaan heerka caadiga ah, oo ay ku siinayaan qiimeeyn culus bilowga gaarka ah ee doonaya inay u soo bandhigaan isticmaaleyaasha waxyaabaha sida NFTs. Kaliya fiirinta bilawga cusub sida Dapper iyo OpenSea oo keenaya qiimeynta $7.6 bilyan iyo $13.3 bilyan siday u kala horreeyaan, waxaadna arki kartaa sida VC-yada u haraadsan yihiin.
Laakiin marka ay timaado in crypto powerhouses, Waxaan weli ku doodi lahaa ma jiro joogitaan ka weyn in web3 marka loo eego Twitter. Shabakadda bulshadu waxay ku taallaa wadnaha iyo nafta crypto iyo NFTs (haddii ay jecel yihiin iyo haddii kaleba) iyo inta badan heshiisyada iyo cilaaqaadka goobta bannaanka ayaa kor u kaca sababtoo ah isdhexgalka barta Twitterka.
Tan sare waa cudurdaar aan uga hadlo xoogaa dalabka Elon Musk ee Twitter iyo adduunka oo noqon kara. Hadda, ujeedka Musk wuxuu sheegay in uu ka dhigayo Twitter xarun ammaan ah oo loogu talagalay hadalka xorta ah si cad wax badan uma laha in la sameeyo crypto, laakiin soo bandhigida dalab $ 43 bilyan waxay u badan tahay inay amaahiso guddiga Twitter-ka iyo saamilayda daqiiqad si ay u tixgeliyaan xaaladda hadda ganacsiga iyo halka ay ka samayn karto horumaro badan oo wadajira.
Toddobaadkan, Coinbase waxay soo bandhigtay beta ee goobtooda suuqa NFT oo ay iskaashanayaan gacan muggeed oo ah ururinta NFT ee ugu sareysa. Waxay raadinayaan inay qaataan OpenSea oo xukuma mugga iibka NFT, waxayna u muuqataa qayb weyn oo ka mid ah bixinta Coinbase waxay noqon doontaa astaamo bulsho oo leh astaamo horumarsan sida… faallooyin. Ma xukumi doono dadaalka aad uga baxsan albaabka, laakiin waxaa cad in ay inta badan raadinayaan inay ku tartamaan xoogga ay gaaraan.
Laakiin sida aan uga fekerayo suuqa NFT oo leh bulsheed qalbigiisa oo dhan, waxaan ka tagay anigoo la yaaban sida Twitter ay suurtogal u tahay inay iska indhatiraan fursadda ay u leeyihiin inay dhistaan ​​​​dukaanka NFT iyaga u gaar ah iyo tartanka OpenSea.
Rafaa warbaahinta bulshada ayaa si weyn ula dhaqmeen isticmaaleyaasheeda crypto-hused sida shil yar oo faraxsan. Nasiib wanaag, sida kaliya ee ay u kacdo isticmaaleyaashan – kuwaas oo balaayiin ku qarash gareeya NFT-yada kuwaas oo inta badan ay ogaadaan oo ku garaacaan tweets – waa $2.99 ​​bishiiba rukunka buluugga ah ee Twitter kaas oo siinaya isticmaaleyaasha hexagon yar oo fiican si ay NFT-yadooda ugu noolaadaan gudaha . Dhanka kale, Twitter-ka ayaa asal ahaan u adeegaya sidii hore udub dhexaad u ah dukaan kasta oo NFT ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ka tagaan goobta si ay wax ula macaamilaan ka hor intaysan soo laaban si ay u dhexgalaan wakhtiga.
Waa in aanay noqon wax la yaab leh in shirkadu ay lacag miiska kaga tagto. Twitter ayaa ku qaatay tobankii sano ee la soo dhaafay ama wax la mid ah nuugida badeecada, laakiin dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay nuugeen wax aad u yar, samaynta dhaqdhaqaaqyo lacag ururin ah oo badan, iibsashada bilawga iyo guud ahaan inay isa soo caddeeyaan xoogaa dheeraad ah iyagoo eegaya inay la tartamaan kuwa xafiiltama sida. Spotify iyo Substack.
Taasi waxay tidhi, Twitter waxay leedahay karti aan la ogaan karin marka loo eego shirkad kasta oo kale oo macaamiisha ah oo cabbirkeeda ah, laakiin diiradda kaliya ee ay ku leedahay daabacaadda fursadaha waxay keenaysaa inay lumiso fursado waaweyn oo toosan oo ay ku tartamayaan Big Tech ay u dili doonaan fursada dhismaha. Facebook waxay u badan tahay inaysan ku iibsan karin jidka OpenSea lacag kasta oo suurtagal ah, laakiin halkan Twitter ayaa leh dariiq furan oo loo maro maamulka web3 shirkadduna way iska indha tirtay.
Twitter-ku waxa ay la haasaawatay sifooyin u gaar ah bulshada sannadihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan wax soo saarkooda Bulshooyinka curdinka ah, laakiin wax la mid ah goob suuqeed oo gaar ah ayaa runtii wax ruxi doonta. Crypto maaha meesha ugu fudud ee lagu bilaabo – NFT spam waxay mar horeba caddeeyeen inay tahay mucaarad adag oo Twitter ah – laakiin toosan ayaa weli u bislaaday xulashada.
Ugu dambeyntiina, turunturooyinka dhabta ah ee Twitter-ka waa la mid tii barnaamijka sheekeysiga ciyaaraha ee Discord uu la halgamay: aragtida guud ee isticmaalaha. Twitter-ku wuu og yahay in ay ku wargelin doonaan inta isticmaalayaasha ah ee ay ku faraxsan yihiin haddii ay dhisaan qalabkooda NFT. Discord waxay isku dayday inay tijaabiso qaar ka mid ah astaamaha NFT-centric dhowr bilood ka hor iyo tweet gaaban oo muujinaya fur-in-app boorsada boorsada ayaa horseeday kumanaan tweets dunk ah oo ku saabsan madaxa Discord iyo dib u dhac wadajir ah. Tani waxay shaki la’aan noqon doontaa kiiska Twitter-ka, kaas oo horeyba isu arkay inuu dabada dib ugu laabanayo khilaafyo badan, sidaas darteed waxaan fahmi karaa inay ka digtoonaadaan inay si toos ah u socdaan.
Laakin iyadoo miiska loo soo bandhigay $43 bilyan, waxaa mudan in la is weydiiyo sida shirkad ku taal xarunta warshadaha qiimihiisu yahay trillions ay si farxad leh isaga indha tirto fursadda ay uga maarmi karto.
(Sawirka Jam STA ROSA / AFP)
baalkii caleema saarka
Hadda ayaanu sii deynay qaybta koowaad ee podcast-ka toddobaadlaha ah, Falcelinta Silsiladda! Khamiis kasta, waxaan ku qaadan doonaa xoogaa waqti ah inaan burburino dhowr ka mid ah sheekooyinka crypto ee ugu sarreeya waxaanan keeni doonaa khubaro si qoto dheer u sii wada mowduucyada waaweyn.
Waa tan waxa aan todobaadkan ka sheekeysanay:
Sida wararka, Coinbase ayaa ugu dambeyntii bilaabay barnaamijkeeda NFT Toddobaadkan ee beta ka dib markii ay ku dhawaaqday qorshaheeda lix bilood ka hor, sida Jacquelyn ayaa wariyay. Dabcan, waxa ay ahayd in aanu kala furfurno tafaasiisha ku hareeraysan bandhigan aadka loo buun buuniyay. Isweydaarsiga Crypto Okcoin wuxuu bilaabay NFT madal usbuucan sidoo kale, sidaas darteed waxaan ka hadalnay xeeladaha, khidmadaha, iyo waxa ay tani ka dhigan tahay hogaamiyaha suuqa ee OpenSea.
Waxaan sidoo kale galnay asalka Axie Infinity hack, kaas oo ahaa kii ugu weynaa taariikhda DeFi. Waxaa soo baxday, dowladda Mareykanka waxay u maleyneysaa in koox burcad ah oo Kuuriyada Waqooyi ay ka dambeysay middaan, dhaqaalahana waxaa loo isticmaali karaa in lagu kobciyo barnaamijka Nukliyeerka ee dalka. Bogga Carly ee TC ayaa noo sheegay. Waxyaabaha cabsida leh, gaar ahaan marka la tixgeliyo sida ay u yar yihiin iyo kuwa aan kheyraadka lahayn qaar ka mid ah bilowga ugu awoodda badan ee loo yaqaan ‘crypto startups’ ay yihiin, haddii ay tahay inay la kulmaan dawlad-goboleedyo dhab ah si ay u ilaaliyaan lacagaha isticmaalaha.
Meta lafteeda ayaa ka dhigtay bartilmaameed sahlan oo loogu talagalay bulshada crypto si ay mar kale u dubto usbuucan, sidaas darteed waxaan ku qasbanahay inaan ka wada hadalno ku dhawaaqistii ugu dambeysay ee shirkadda in ay qorsheyneyso in ay ku dalacdo khidmadaha macaamilka ee iibka alaabta dhijitaalka ah ee Horizon Worlds metaverse.
Waxaan kor ugu qaadnay wadahadal lala yeeshay Justin Blau, oo loo yaqaan magaciisa DJ 3LAU, oo ku saabsan dhammaan waxyaabaha muusikada iyo NFTs.
Rukumo Silsilad Daaran Tufaax, Spotifyama goobtaada podcast-ka ee kale ee aad doorato inaad nala socoto usbuuc kasta.
Xuquuqda Sawirka: PixelChoice (wuxuu ka furmay daaqad cusub) / Sawirada Getty
Halka lacagta bilawga ah ay u socoto adduunka crypto:
Isweydaarsiga crypto ee Hindiya CoinDCX wuxuu kor u qaaday $ 135 milyan Taxanaha D oo ay wada hogaaminayaan Steadview iyo Pantera oo ku qiimeeyay $ 2.15 bilyan
Inkasta oo ay jirto jawi sharciyeed oo adag, CoinDCX waxay raadineysaa inay labanlaabto fursadaha crypto ee Hindiya. “Waxaan samayn doonaa wax kasta oo ay qaadato si aan u siino raaxo dheeraad ah maamulayaasha,” CEO Sumit Gupta ayaa noo sheegay.
Wax badan ka akhri TechCrunch
Bilawga ganacsiga crypto BlockApps ayaa kor u qaaday $41 milyan oo wareeg ah oo ay hogaaminayso Liberty City Ventures
Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee dhaqameed ayaa laga yaabaa inaysan fahmin sababta ay u maalgashanayaan inay ganacsigooda ku dhejiyaan blockchain, BlockApps waxay raadineysaa inay gacan ka geysato sidii ay u taabsiin lahayd fursadaha ” caajiska ah ” ee crypto.
Ethereum-ka bilawga bilawga ah ee Spruce waxay kor u qaadaysaa $ 34 million Taxanaha A ee uu hogaamiyo Andreessen Horowitz
Xawaaladaha Crypto waxay raadinayaan inay u rogaan ciwaannada boorsada magaca isticmaale cusub, Spruce’s “la-soo-galitaanka Ethereum” Xalka wuxuu higsanayaa inuu hagaajiyo gelitaanka iyo lacag-bixinta isku mar.
Shirkadda falanqaynta Blockchain ee Flipside Crypto waxay kor u qaadaysaa $ 50 milyan oo wareeg ah oo ay hogaaminayso Republic Capital oo qiimaheedu dhan yahay $ 350 milyan
Isweydaarsiga Crypto Fasset wuxuu kiciyaa $ 22 milyan Taxanaha A oo ay hogaaminayaan Liberty City Ventures iyo Fatima Gobi Ventures
Adeegga Ogeysiinta Riixitaanka Ethereum (EPNS) waxay kor u qaadaysaa $ 10.1 milyan Taxanaha A ee uu hoggaamiyo Jump Crypto
Nidaamka amaahinta Hedge ee fadhigiisu yahay Solana ayaa kor u qaaday $3.7 milyan oo ay hogaaminayso Race Capital
“Miisaanka ganacsiga” Mytaverse wuxuu ururiyaa $7.6 milyan wareeg ah oo ay hogaaminayso Blumberg Capital
Robinhood waxa uu ku helay lacag bilow ah oo ah jeebka crypto Ziglu lacag aan la shaacin
Framework Ventures waxay daaha ka qaadaysaa $400 million fund crypto iyadoo diiradda la saarayo ciyaaraha blockchain
Xuquuqda Sawirka: Paul Yeung / Bloomberg (wuxuu ka furmay daaqad cusub) / Sawirada Getty
falanqaynta lagu daray
Qaar ka mid ah falanqaynta crypto ee ka socota adeeggayaga isdiiwaangelinta TechCrunch+:
Uruurinta NFT ee ugu sareysa waxay keenaysaa malaayiin doolar todobaadkii, laakiin kee baa badbaadi doona?
NFT-yada ugu caansan waxay ku kacayaan malaayiin doollar toddobaad kasta, laakiin intee ayay soconaysaa? Waxa aanu galnay waxa ay la macno tahay in suuqa NFT laga helo, imisa iibsade ayaa si dhab ah wax u iibsanaya, waa maxay qiimaha wadida iyo xagee ka socotaa qaybtan (oo u muuqata mid soo koraysa). Tilmaan: badidoodu way guuldarraysan doonaan sanadaha soo socda.
Iskaashatada Dallas Cowboys ee Blockchain.com waxay muujinaysaa soo-gaadhis badan oo crypto-gaaban
Toddobaad kale, ogeysiis kale oo ku saabsan koox isboorti oo iskaashi la leh shirkad crypto ah. Laakiin wakhtigan waa ka duwan yahay: waa markii ugu horeysay ee isweydaarsiga crypto uu iskaashi la yeesho kooxda NFL, Dallas Cowboys, arrinkaas. Tani waxay albaabka u furi kartaa saldhig taageere oo kale oo aan la taaban waxayna sii ballaarin kartaa korsashada crypto ee dhagaystayaasha caadiga ah.
Milkiilayaasha blue-chip NFT waxay sahamiyaan isticmaalka beddelka ah marka iibku hoos u dhaco
Inkasta oo NFT-yada ugu sarreeya ay keenayaan cajiin badan, iibka NFT ayaa hoos uga dhacay heerarkii ugu sarreeyay; laakiin tani kama joojinayso ururiyayaasha inay raadiyaan fursado kale oo ay ku kasbadaan raasumaalka ururintooda buluug-chip-ka qaaliga ah. Suuqa amaahda ee NFT ayaa sii kululaanaya iyadoo milkiilayaashu ay ka faa’iideysanayaan hantidooda si ay u helaan lacag caddaan ah oo ay u abuuraan wax soo saar dheeraad ah. Tani waxay albaabada u furi kartaa fursado cusub oo NFT-yada sare ah iyo awoodda lagu kordhiyo waxtarka raasumaalka ee suuqa soo koraya.
Taasi waa tan usbuucan, mahadsanid akhrinta!
Hel warsidahan sanduuqaaga boostada adiga oo iska diiwaangelinaya falcelinta Chain iyo nagu raac Twitter 🙂